गगनलाई “गूड लक” « Sansar News
गगनलाई “गूड लक”
३० कार्तिक २०७३, मंगलवार ०५:२७
कोही बिरामी पर्दा अक्सर हाम्रो समाजमा सत्रु नै भए पनि सहानूभुती जाग्छ तर अहिले नेपालको “मेनस्ट्रीम” मिडीया र सोसियल मिडीया पूर्ब उप-प्रधान मंत्री, बीपीकी भतिजी र गिरिजा प्रसाद कि छोरी सुजाता प्रती खनिएको देखियो धेरै जायज कारणले ।
यो बिबाद बारे मेरो अभिमत के हो भने समस्या हाम्रो राजनीती र राज्यको नीती दुबैमा छ । राजनीतीमा समस्या के भने दिनेले किन दिने र लिनेले किन लिने भन्ने दुबै तिरको नैतिकताको कुरा आउछ । हजारौं जनता जीबनजल र सिटामल सम्म नपाएर मर्नु पर्ने अवस्था भएको गरीब देशमा उपचार खर्च आफै जुटाउन सक्ने हैसियत हुनेले राज्यबाट माग्न नैतिकताले नदिनु पर्ने हो तर परिबार र आफुले जिन्दगी नै देशलाई सुम्पिएका कारण यो हाम्रो अधिकार हो भन्ने होला वा अरु नेताले लिन हुने म बिरामी पर्दा लिन किन नहुने भन्ने पनि होला । तर जन-मानसमा यसले नराम्रो छाप छोड्छ । भनिन्छ: Trust IsaOne Time Gift; Don’t Break It. अर्को कुरा देश भित्रको स्वास्थ्य सेवा जिर्ण हुने तर राज्यको पैसाले बाहिर उपचार गराउदा राम्रो शन्देश जादैन राजनीती गर्नेका लागी । तर यसो भन्नुको अर्थ उपचार गराउन बाहिर जानै हुन्न भन्ने होईन । आफ्नो हैसियतले सक्नेले जहाँ गएर उपचार गराए हुन्छ । तर राज्यबाट मागिसके पछी देशको अवस्था र आफ्नो दायित्व बोध चाँही हुनु पर्छ ।
तर दिने र माग्ने दुबैतिर लाजै नभए के गर्ने ? चाहे प्रधान मंत्री होस वा गृह मंत्री वा स्वास्थ्य मंत्री, तजबिजमा पैसा बाँड्ने काम बर्षौं देखी चली आएको छ हाम्रो नेपालमा । धेरै यस्ता निर्णय मंत्रीमण्डलमा गुप-चुप मै हुन्छन । समय, सन्दर्भ र गगनले ल्याउन खोजेको नयाँ नीतीले सुजाता अहिले “स्केन्डलाईज” भएकी मात्रै हुन ।
युद्दबाट गुज्रेको देश रुवाण्डामा अहिले ९१% जनताको स्वास्थ बीमा छ । नेपालको हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन आबश्यक छ । होईन भने कुनै न कुनै निहुले सत्तामा भएकाले पैसाको फाइदा उठाउने नै छन । कसैलाई दिने कसैलाई नदिने भन्ने पनि हुन्न । कार्यबिधी बनाए पनि आफ्ना लागी सच्याइ हाल्छ्न । आइजीपी त यसरी नै फेरिन्छन । कि त स्वास्थ्य उपचार सहयोग भनेर कानून नै ल्याउनु पर्‍यो ।
अब रह्यो गगनको राजीनामाको कुरा ! गगन आफैले राजीनामा गरेर नभाग्ने भनी सके । राजीनामा दिएर हार स्विकार्नु भन्दा स्वास्थ्य सेवा सुधार्ने धेरै कुरामा समय खेर नफालेर लागे हुन्छ । तर प्रधान मंत्री र मंत्री बिचको द्वन्दको स्थितले राम्रो संकेत दिदैन । “सिस्टम” भित्रै ठूलो लडाइ लड्नु पर्ने देखिन्छ । तर अहिले लाई भने गगन लाई “गूड लक” ।